လေဆာနဲ့ တက်တူးဖျက်တော့မယ်ဆိုရင် - Hello Sayarwon
အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ “အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမင်ရည် စုပ်ထိုး၊ ဤသုံးမျိုး ချက်မပိုင် နောက်ပြင်ရန် ခက်သည့်အမျိုး” လို့ ဆိုစကားရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုတာ၊ ဘုရားကျောင်းကန် တည်ဆောက်လှူဒါန်းတာနဲ့ ဆေးမင်ကြောင်လို့ခေါ်တဲ့ တက်တူး (Tattoo) ထိုးတာတွေ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ပြန်ပြင်ရမလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါ။
နည်းပညာတွေခေတ်မီလာတဲ့ ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ တက်တူးထိုးတာကို ပြင်ဆင်ဖယ်ရှားလို့ ရနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အရင်လို ပြန်ပြင်ဖို့ ဖယ်ရှားဖို့ ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခု မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လေ့လာချက်တွေအရ တက်တူးထိုးထားတဲ့ လူ ၇ ယောက်မှာ တစ်ယောက်နှုန်းက သူတို့ တက်တူးထိုးခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောင်တရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တက်တူးတွေကို ပြန်လည်ဖျက်ပစ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တက်တူးကို ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဟာ ၁၉၉၀ ခုလွန်နှစ်တွေကတည်းက စတင်ခေတ်စားလာတာဖြစ်ပြီးတော့ ခရမ်လိမ်းတာမျိုး၊ Salabrasion လိုနည်းလမ်းမျိုးတွေရှိပေမယ့်လည်း လေဆာနဲ့ ဖယ်ရှားတဲ့နည်းလမ်းဟာ လူသုံးအများဆုံးနဲ့ စိတ်အချရဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တက်တူးကို ဖယ်ရှားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့။ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖယ်ရှားမယ့်သူတွေအတွက်ကတော့ မေးခွန်းတွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – သင်ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့နေရာမှာ အသားအရောင် ပြောင်းလဲသွားမှာလား? ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိလာမှာလား။ မလှမပဖြစ်နေမှာလား?
တက်တူးဖျက်ဖို့ တက်တူးဆိုင်ကို ပြန်သွားရမလား? Dermatologist ဆီ သွားရမလား?
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Dermatologist (အရေပြားအထူးကု) ဆီကိုသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တက်တူးကို အရေပြားပေါ်ကနေ ဖယ်ရှားတာဖြစ်တာမို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ Dermatologist နဲ့ အရင်တိုင်ပင်ပြီး လေဆာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ ဖျက်တာက စိတ်အချရဆုံးပါပဲ။
Dermatologist က တက်တူးကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်လို့လား?
တက်တူးဖျက်တဲ့နေရာမှာ အများဆုံးအသုံးပြုတာက Q-switched laser ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းနဲ့ဆိုရင် လျင်မြန်ပြီး ထိရောက်မှုလည်းရှိပါတယ်။ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်နိုင်ချေလည်း နည်းပါးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဆေးသားတချို့ ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။ Dermatologist တွေသုံးတဲ့ Picosecond laser ဆိုတဲ့ တခြားနည်းလမ်းတစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ တက်တူးအရောင်ရဲ့ Particles လေးတွေကို ဖြိုခွဲပစ်တာမို့ ပိုထိရောက်ပါတယ်။
တက်တူးဖျက်တာဟာ ယျေဘုယျအားဖြင့် လျင်မြန်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မိနစ်ပိုင်းသာကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ တက်တူးရဲ့ အရွယ်အစားအပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်။ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး ပြန်လာရမလားဆိုရင်တော့ လေဆာနဲ့ ဖယ်ရှားချိန်မှာ ကာယကံရှင်ရဲ့ အရေပြားက ဘယ်လိုတုန့်ပြန်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာသာ မူတည်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လေဆာနဲ့ တက်တူးကို ဖယ်ရှားတဲ့အခါမျိုးမှာ အလွန်အမင်းကို နာကျင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မစတင်ခင်မှာ ထုံကျင်စေမယ့် ခရင်မ်တွေ၊ ဆေးထိုးတာတွေ ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ထားရင် ပိုဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကတော့ အာရုံလွှဲဖယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ချို့ သုံးကြပါတယ်။
ဖျက်ပြီးချိန်မှာ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့က များသောအားဖြင့် အချိန် တစ်ပတ်လောက် ကြာမြင့်လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အရေပြားနီမြန်းနေတာမျိုး၊ မီးလောင်ဖုလို အရည်ကြည်ဖုတွေထတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တက်တူးဖျက်လိုက်တဲ့နေရာက အသားအရေက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?
တက်တူးကို စနစ်တကျ ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး မှန်ကန်တဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေလည်း သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် အစောပိုင်းမှာ အဆိုပါနေရာဟာ ဖြူနေနိုင်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပုံမှန်အသားအရေမျိုး ပြန်ရလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့အသားအရေတွေမှာတော့ ပုံမှန်ထက် အနည်းငယ်ပိုဖျော့တဲ့ အရောင်မျိုး၊ တက်တူးရဲ့အရာလေး ခပ်ရေးရေးပေါ်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာမြင့်လာရင် အဆိုပါ အရာလေးတွေ ပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ယာယီအားဖြင့် အသားအရေ အရမ်းဖျော့သွားတာ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းရင့်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တက်တူးဖျက်မယ့်လူတွေ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်တဲ့ အချက် ၄ ချက်
မိမိ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က တက်တူးကို ဖယ်ရှားတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင် အောက်ပါ အချက်လေးချက်ကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တက်တူးဖျက်ပြီးချိန်မှာ အဲ့ဒီနေရာကို နေရောင်တိုက်ရိုက်မထိအောင် သတိထားရှောင်ရှားပါ။ နေရာင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းဟာ အသားအရောင်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သလို ကုထုံးတွေကိုလည်း မထိရောက်အောင် တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
အသားအရေကို အကျိုးရှိစေမယ့် လိမ်းဆေးအဆီတစ်မျိုးမျိုးလိမ်းပေးပါ။ အဆီလိမ်းပေးတာက အနာကျက်မြန်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့သာ ဖယ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး မကျွမ်းကျင်တဲ့ ကုသသူတွေနဲ့ ကုသမယ်ဆိုရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်သလို အကုန်အစင် ဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း မရှိတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ရှည်ပါ။ တက်တူးဖျက်ပြီးနောက် အဆိုပါတက်တူးဖျက်ထားတဲ့ နေရာကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုရင် ပုံမှန် အသားအရေမျိုးပြန်ရဖို့ ၆ ပတ်ကနေ ၈ ပတ်လောက်အထိ စောင့်ဆိုင်းရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။